Liverpool Oo Anfield Ku Ciqaabtay Man City Kulan Ay Aaladda VAR Saameyn Ku Yeelatay & Rikoorka Guuldaro La'aanta Reds Oo Wali Sii Socda. | Laacib.net
Liverpool Oo Anfield Ku Ciqaabtay Man City Kulan Ay Aaladda VAR Saameyn Ku Yeelatay & Rikoorka Guuldaro La’aanta Reds Oo Wali Sii Socda.
November 10, 2019 Abdirashid Mohamud "SHarDinHO" 12
Saddex gool oo ay labadii qeyb ee ciyaarta kala dhaliyeen Sadio Mane, Fabinho & Mohamed Salah ayaa guul u horseeday Manchester City, waxaana wali halkeeda kasii socda dhibaatada ay kooxda difaacaneysa horyaalka ku qabto garoonka Anfield.
Pep Guardiola wuxuu raadinayaa wali guushiisii ugu horreysay uu ku gaaro gurigaan, sidoo kalana Man City ayaan ku badin ilaa sanadkii 2003, sanad kale ayeyna sugi doonaan.
Liverpool waa kooxda kaliya ee aan laga adkaan wali Premier League, 34-dhibcood ayeyna heleen kadib 12-kulan oo ay ciyaareen kaliya hal jeer ayey barbaro la galeen Man United kulan ka dhacay garoonka Old Trafford.
Manchester City haatan kaalinta 4-aad ee horyaalka ayey u dhacday, waxaana ka sarreeya sidoo kale marka laga reebo Reds labada kooxood ee Foxes iyo Blues.
GOAL: Daqiiqadii 6-aad: Fabinho ayaa hogaanka u dhiibay Liverpool kadib markii uu kubad aad u xoogan ka tuuray banaanka xerada ganaaxa, wakhti hore ayuu goolasha bilaabay iyadoo Claudio Bravo uu awoodi waayay inuu badbaadiyo.
FURSADA: Daqiiqadii 8-aad: Sterling ayaa u dhawaaday inuu barbaro u keeno kooxdiisa, balse kubadii uu madaxa ku tuuray goosha kuma aadin, waxeyna aheyd kubad laad xor ah oo geesta laga soo qaaday.
FURSADA: Daqiiqadii 11-aad: Kevin de Bruyne ayaa mar kale qatar galiyay goolka Liverpool, laad xor ah ayuu qaaday balse kubadii uu Aguero u gudbiyay kama faa’ideysan.
GOAL: Daqiiqadii 12-aad: Alexander-Arnold ayaa kubad kasoo gadiyay geeskiisa, wuxuuna kubad u gudbiyay Robertson oo si laga fiirsaday kubad joog sare ah u dhex dhigay xerada ganaaxa, si fudud Mohamed Salah ayaa madax ugu dhameystiray.
FURSAD: Daqiiqadii 20-aad: Wijnaldum ayaa kubad hal iyo labo ah la ciyaaray Mane, si fiican ayuu kubad ugu xakameeyay xerada ganaaxa dhexdeeda, balse kubadii uu goolka aadiyay waxaa koorne u saaray Angelino.
FURSAD: Daqiiqadii 24-aad: Sergio Aguero ayaa kubad ku helay xerada ganaaxa, si qurux badan ayuu kubad lugahiisa uga hoos bixiyay Fabinho ka hor inta uusan kubad awood leh goosha aadin, Allison Becker ayaase ka badbaadiyay.
FURSAD: Daqiiqadii 27-aad: Liverpool ayaa ku sigatay in gool laga dhaliyo, Angelino ayaa kubad ku helay xerada ganaaxa, Lovren ayaa kula dagaalamay ka hor inta aysan kubadda birta kaga dhicin.
Daqiiqadii 35-aad: Roberto Firmino ayaa kuabd ay iska soo difaaceen daafaca City ku helay xerada banaankeeda, si fiican ayuu xiddig City ka tirsan ugu gooyay ka hor inta uusan kubad awood leh hawada sare u dirin.
FURSAD: Daqiiqadii 37-aad: Arnold ayaa bartamaha garoonka geestiisa kubad kala soo orday ilaa uu kasoo gaaro xerada ganaaxa, si fudud ayuu ugu gudbiyay Firmino kaas oo kubad awood leh ku tuuray goolka, basle Bravo ayaa ka badbaadiyay.
FURSAD: Daqiiqadii 41-aad: Sergio Aguero kuma guuleysan inuu kooxdiisa gool u dhaliyo markii kubad uu ka helay De Bruyne uu la galay xerada ganaaxa, kubadii uu goolka aadiyay banaanka ayey ka martay.
FURSAD: Daqiiqadii 44-aad: Mohamed Salah wuxuu damcay inuu gool caaqibo leh ka dhaliyo Man City, banaanka xerada isagoo taagan ayuu helay, balse kubadii uu goolka aadiyay waxaa la dagay Bravo.
Qeybtii hore ciyaarta ayaa lagu kala maray 2-0, oo ay hogaanka ku heyso Liverpool, qeybtii labaad ayaa lasoo laabtay iyadoo labada kooxood aysan wax badal ah sameynin.
FURSAD: Daqiqadii 48-aad: Ciyaartoyda Man City ayaa durba bilaabay iney cadaadis xoog leh saaraan goolka Liverpool, kubad laga diiday De Bruyne ayuu helay Gundogan kaas oo isna kubadii uu goolka aadiyay la isku dhigay.
GOAL: Daqiiqadii 51-aad: Henderson ayaa sameeyay caawinaad, kubad aad looga shaqeeyay ayuu ka qaaday geesta bidix, balse Sadio Mane ayaa madax ku dhameystiray oo sii xumeeyay xaaladda kooxda difaacaneysa horyaalka.
FURSAD: Daqiiqadii 53-aad: Raheem Sterling ayaa dhaafay laba ka mid ah xiddigaha Reds, ka hor inta uusan isku dayin inuu kubad awood leh goosha aadiyo, Lovren ayaana ka beeniyay oo isagoo jiifa ka saaray.
FURSAD: Daqiiqadi 67-aad: Aguero ayaa lumiyay fursad uu kooxdiisa gool ugu dhalin karay, Kevin ayaa kubad usoo dhigay meel goolka u dhaw, balse lugta lama helin.
GOAL: Daqiiqadii 77-aad: Bernardo Silva ayaa shabaqa soo taabtay kadib markii uu goolhaye Allison daba mariyay kubad uu soo taraarixiyay Angelino, waxey u muuqatay inuu ciyaarta hammi ka galiyay kooxdiisa.
Pep Guardiola ayaa dood badan ka keenay markii garsoore Olivier uu fasaxay kubad uu gacanta ku taabtay Arnold, waxeyna aheyd markii labaad oo ay aheyd in rigoore la siiyo kooxda difaacaneysa horyaalka balse laga diigay.
Natiijada ciyaarta waxey kusoo dhamaatay 3-1, Liverpool ayaana gurigeeda kaga badisay Man City kulan xiiso badnaa oo ay saameyn ku yeelatay natiijada aaladda VAR.
Liverpool waxey hogaanka ku heysaa 8-dhibcood iyadoo si wadajir ah uga sarreyso kooxaha dhibco wadaagga ah ee Chelsea & Leicester City, halka Manchester City ay u dhacday kaalinta 4-aad iyadoo 9-dhibcood ka hooseysa Reds.
12 responses to “Liverpool Oo Anfield Ku Ciqaabtay Man City Kulan Ay Aaladda VAR Saameyn Ku Yeelatay & Rikoorka Guuldaro La’aanta Reds Oo Wali Sii Socda.”
waxaan hore commentigii aan kabixiyay refree Oliver markii loo magacaaabay coyaaartaaan inuuyahay taageere liverpool ah soo idiinma cadaanin cawada taaasu.
laacib waxaan kacodaanayaa iney soo bandhigaan commentigii aan kusheegay qodobkii kusaabaanaa magacaabida ref Oliver
taageera yaasha England wey noosoogudbiyaaane
Wlh waa sax referee waa taagero Liverpool
cadaalad darada garsoorka ayaa naga badisay
Sadex iyo hal ayey ku dhamaatay qoraalka iskasax sxb
Markaawi mancity says:
Run mise been. Xaqiiiqdii Oliver referee 12 ruuh maa lagu badiyaa
Xeerdherayasha waxgaradka kubada cagta Mar hore bey sheegen Enfield sixirkisa inladugay kolhore. Mahres
Maantana laba rigoore noo diiday
Koley etihaad 3 point jeebkena
Cadalad daro VR way uqariyen. Oliver taagere liverpoolo
Viva sky blues aguero
warwaaka korna waan usoconaa
Ciyaartu 3 and 1 bay ku dhamatay nationals saxda lkn waxad sheegaysan 3 0
Taageerayasha Shalay City buuq badnaa hadii cadalaad daro la sheego anagaba gool qaldan aa nalaga dhaliyay Fabinho o dhulka yaalo aa goal nagala dhalshay mida kale Sterling waxuu lahaa red Card marka baqbaqda naga joojiya
Safwaan hargaysaawi says:
Liverpool 3 1 man-city guul raaxo leh dheh kkkkkkkkkkkk waar ha karaamo seegina habaar laygu kari waaye
Jamaal Hashi says:
War galeey muu noqonaa hee ciyaartii waa dhamaatay waana lagu kala baxay ee calaacalka hala iska dhaafo waa inoo markale iyo Etihat stadium
guul iyo guul daro way u yimaadeen manchester city lkn cadaalad daro garsoor ayaa ku habsatay waa inoo jaanis danbe iyo anfil
waa wax caadi iska ah, qofkastoo guul daresta waa qasab inuu eed ama marmarsiyo keeno, refreega gaduu qaldan yahay VAR na miyey loverpool lajirtay 🤣🤣🤣
kudarso gudiga madaxda Premier league ayagana refree ga ma ciqabayaan, ayagana loverpool ayey la jireen…
ar city meesha waalagu rafaadiye.🤣🤣🤣